लोग्नेलाई काटेर मासु पकाइन् । - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
लोग्नेलाई काटेर मासु पकाइन् ।
मान्छे कतिसम्म निर्दयी बन्न सकेको हँ ? चीनमा एक महिलाले निर्दयीपनाको पराकाष्ठा प्रस्तुत गरेकी छिन् । ती महिलाले आफ्नै पलोग्नेलाई मारेर मासु काएकी छिन् ।
अनहुइ प्रान्तको लुआन सहरकी ती महिलाले आफ्नो लोग्नेलाई मारिन्, उनको जिउ पानीमा पकाइन् अनि प्रहरीमा उजुरी गर्न गइन् । लोग्नेको जिउ शव काटेर पकाएपछि हत्या गरेको प्रमाण नभेटियोस् भन्ने उनको आकांक्षा थियो ।ती महिलाले वास्तवमा बदला लिनको लागि लोग्नेलाई मारेर मासु पकाएकी रहिछन् । लोग्नेले ५६ दिनकी छोरीको जिउमा अन्धविश्वासी भएर सियो रोपेको प्रति क्रुद्ध रहेकी उनले लोग्नेले आफुलाई पनि वर्षौँदेखि पीडा दिँदै आएको बताइन् ।
वामदेवको अर्को प्रस्ताव पनि अस्वीकार, ओली र गौतम समन्ध टुट्दै !
गुणस्तरहीन काम र चरम लापरबाही नरोकिएपछि पप्पुसँगको ठेक्का तोडियो !